FIAKARAN’NY VIDIN-TSOLIKA : Fanaovana fanaraha-maso, miala any indray ny fandrebirebena | NewsMada
Na nisy asa ny « audit » teo anivon’ny Jirama, vao mainka nihamafy ny delestazy.
Manoloana ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy misy fitsaharany, nanapa-kevitra ny eo anivon’ny filankevitry ny governemanta fa hanatanteraka fanaraha-maso ny fiakaran’ny vidin-tsolika, ny talata teo. Vahaolana tsy mamaha ny tena olan’ny fiainam-bahoaka fa karazany fandrebirebena fotsiny… Taorian’ny filankevitry ny governemanta manokana notanterahina maika teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo, ny talata teo, nanapa-kevitra izy ireo fa hisy ny fanaraha-maso ny fiakaran’ny vidin-tsolika mba hahitana vahaolana ho an’ny tombontsoam-bahoaka. Izany no natao mba hiatrehana ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy mitsaha-misondrotra ity. Tsy vao izao no nisy fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondram-panjakana, saingy resaka ambony latabatra sy tsy hita soritra, fa vao mainka aza nitondra an-davaka ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny. Efa nisy, ohatra, ny fanaovana fanaraha-maso ny momba ny orinasa Jirama, eo amin’ny fomba fitantanana. Tafiditra tamin’izany fa mahatratra 3 tapitrisa euro isam-bolana no karazan’ny fanampiana ity orinasam-panjakana ity, saingy tsy hita ny tena fahombiazana fa vao mainka aza mitotongana sy latsaka an-kady ny Jirama.
Vola very fotsiny
Anisan’ny nanatanteraka, izao fanaraha-maso izao, ny teo anivon’ny ivontoeran’ny « Delta Audit ». Raha noheverina fa hitondra fanatsarana ity orinasa ity izany, vao mainka tafiditra anaty maizina sy latsaka an-davaka ny orinasa Jirama. Izao iaraha-mahita izao ny delestazy tsy manam-pitsaharany. Ny tena zava-doza, mbola mitohy hatrany ny teti-dromotra sy lalao maloto amin’ny fanaovana tolo-bidy momba ny famatsiana solika ity orinasa ity. Natao ankilabao ny tolokevitry avy oo amin’ny orinasa Madagascar Oil, ny amin’ny hamatsiana solika mavesatra ity orinasam-panjakana Jirama ity, izay mora vidy kokoa raha mitaha amin’ny gazoala efa fampiasa. Karazan’ny very an-javony sy vola atsipy eny am-baravarankely fotsiny ny fanampiana omen’ny Banky iraisam-pirenena mitentina 1,3 tapitrisa dolara. Ahina mbola izany no hitranga amin’izao fanaraha-maso ny vidin-tsolika, nandraisan’ny governemanta fanapahan-kevitra izao, izay tohanan’ny Banky iraisam-pirenena. Raha atao bango tokana, karazany ho very maina ihany izao fanapahan-kevitry ny governemanta momba ity resaka fanaraha-maso ity. Fandrebirebena saim-bahoaka fa tsy hitondra fihatsaran’ny sosialim-bahoaka fotsiny.
Araka ny fanaraha-maso notanterahan’ny « Delta Audit » momba ny orinasa Jirama. Nahatratra 77 ny fifanarahana, ary nahatratra 20 ireo mpandraharaha. Ny 13 tamin’ireo fifanarahana dia ny fanofana ilay gropy. Ny fifanarahana 58 kosa, momba ny resaka fividianana angovo ary ny 6, fifanarahana tsy fantatra. Marobe ireo fifanarahana tsy voatanisa eo anivon’ny ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics), izay miandraikitra ny tsenam-baro-panjakana. Tsy maintsy manaraka ny dingan’ny ara-dalàna, dia ny fandalovana eo anivon’ny tsenam-baro-panjakana ny fomba famatsian-draharaha ka izay no mahatonga azy ireo ho marobe tahaka izao ao. Nahatratra 11 amin’ireo niandraikitra ny fifanarahana no tsy nandalo dingan’ny tsenam-baro-panjakana sy ny fomba famatsian-draharaha izay. Mba tsy hahamaty momoka ny raharaha, mila andraisana fepetra haingana ny raharaha toa izao, ho an’ny tombontsoan’ny mpanjifa sy ity orinasam-panjakana Jirama ity. Ialana ny gaboraraka sy ny tsy fahaiza-mitantana miseholany eo anivon’ity orinasa ity. Taorian’ny fisian’ny fanaraha-maso tamin’ny Jirama, volan-kankafotra ny tolotra ho an’ny vahoaka, vao mainka aza niharatsy satria lavareny ny delestazy iainan’ny valalabemandry ankehitriny.